POETRY – Page 8 – The Art Garden Rohingya
Time By Abdul Wajed Rashidi Has always been there It was the beginning, And it's going to be the end It is forever changing, never the same as it was ...
My Poem By Shaker Arakani Till I getapoem, my mind erodes likeamonsoon river Even when it is concluded, my mind flows without direction Any ideas that come to bathe ...
That's My Land By Ro Anamul Hasan Under the sky, it’s harmonious Shining and melodious Inherited from ancestors A wealthy habitat like the heaven That’s my land, I was born in. Forest, ...
ရေးဖွဲ့သူ-ေ မောင်တျာတျာ @ Mohammed Rahayl စိမ်းစိုတောတောင် အရိပ်ရပင် ခမ်းနားကြီးကျယ်​ ​ကျောင်းဝန်းကျင်​နှင့်​ ​မေ့ရခက်​သည့်​ ငါတို့အာရ်ကန်။ မဆိုစ​ကောင်း၊ လူယုတ်မာကြောင့် ဖျက်ရှို့ခံရ၊ ငါတို့အိမ်များ အိပ်မက်မက်တိုင်း၊ အလိုလိုပေါ်လာ ချစ်​သူ့အစား ​ရွှေအာရ်ကာန်သာ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်​ ဩဂုတ်၂၅ ရက်​ စလာရခဲ့ သည်​ခရီးမှာ ​ကျေးဇူးသခင်​ မိနှင့်​ဖက သားသမီးကို လက်​တွဲငင်​ကာ အသုံး​ဆောင်နည်းနည်း ရရထမ်း၍ ရွှံ့​ဗွက်​များကို အံတုကာဖြင့်​ ခက်​ခဲစွာ​ စခဲ့ရ ငါတို့ သည်​ခရီး။ ယခုအချိန်ဆို- ကျိုးစီးပွားရူး၊ လူလိမ်တွေကြောင့် ထူးခြားလာခဲ၊ အိမ်​ပြန်​ခရီး သည်​လိုမျိုးနှင့်​ ဘယ်​ထိကြာအံ့ ငါတို့ အိမ်ပြန်ခရီး။ လွမ်းပါသည်​၊ သိပ်​ကိုလွမ်းပါသည် ​ ရွှေအာရ်ကန်ရယ်- ချောမောပါစေ မှန်မြန်ပါစေ သင့်​ဆီ ငါတို့အိမ်​ပြန်​ခရီး။ 22-5-2019 The ...
မျှော်လင့်ရာရာ ရို့ဘဝ ရေးဖွဲ့သူ- ညီတင်လှ (မျိုးစိတ်) မိဘကဝေး၊ သားသမီးကွဲ ရပ်ရွာလဲဝေး၊ အဖော်ခွဲ ဒုက္ခစုံလဲ၊ မျှော်ခြင်းနဲ့သာ ရှေ့ဆက်လာတဲ့ ရို့ဘဝ၊၊ စဉ်းစားမရဲ၊ ဒဏ်ကြေးများနှင့် မျက်ရည်ကျလို့ ၊ လွမ်းပူစွာဖြင့် စိတ်ပြင်းနာ၍ ၊ သေလုဆဲဆဲ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ရိုခရီး၊၊ ဪ…ရိုအမျိုးသား၊ ဒုက္ခသားကောင် ကံမှောင်မဆုံး၊ ညှင်းပန်းမကုန် ရက်စက်ကွင်းမှ၊ ပြေးသွားချင်လဲ၊ လောကဓံမြိန်ချင်၊ အကောင်းကိုမျှော် ရှေ့ဆက်နေတဲ့၊ ...
တို့ဆရာ ရေးဖွဲ့သူ- ဦးခန့် (ကမ္ဘာသစ်) အဖတ်အရေး သူသင်ပေး ကျေးဇူးကြီးမား တို့ဆရာ။ ဆုံးမသွန်သင် လမ်းမှန်များ ညွန်ပြပေးရာ တို့ဆရာ။ ကျောနှင့်ရင်သား မခွဲခြား စေတနာဖြူ တို့ဆရာ။ တပည့်ကောင်းများ မွေးဖို့ရာ ဒုက္ခမမူ တို့ဆရာ။ ချစ်ခင်ကြင်နာ ကရုဏာ လေးစားအပ်ရာ တို့ဆရာ။ 21-5-2019 The Art Garden Rohingya
By Ahtaram Shine I am lonesomeBeggingachanceblubber out to learnMy screaming is loudSpreading it in the airFloating with high tide in the sea "The hearers enjoying it as the song of Nightingale" Beingason of ...
By Shahid Abbas Lay your weary head upon my chestI come to you wanting nothing but loveTell me all the secrets and sinsWhich eat away your soulLet your worries fall awayLike leaves fromatree ...
By Moheb The sun always rises in the east,And sets in the west He awakes us in the morning,And asks us to settle down in the evening He ever follows the rules of nature,His light is for ...
By Pacifist Farooq Five times per dayThe call in peaceful wayPenetrates through my earIt is the Adhan: call to prayer It shakes my hand lightlyHolds me quite tightly And whispers me to embrace the rightEven in dark ...
By Mohammad Shafi I was born to two Burmese citizens All were exiled in 90sSnatched away our citizenship Power applied in negative ways Walked for days and nights No sleep and food in jungle Pavements without streets With sweets my father ...
ရိုကံဇာတာ ရေးဖွဲ့သူ- ဒေ၀ံ | ရတနာခြယ်စီ ရိုဌာနေမှ တစ်ပါးနယ်သို့ အပီအပြင် ပြည်နှင်ဒဏ်ခတ် အဖိုးအနဂ္ဃ ထိုက်သည့်ဘ၀ မကြွေသင့်ဘဲ ကြွေခဲ့ရ။ နှုတ်ခဲဖွယ်ရာ ဘောဇဉ်ကြွယ်ဝ အ၀၀ကို ကျောခိုင်းစေလျက် အနန္တဂုဏ် မငဲ့ညှာနိုင် မ၀ရေစာ မလောက်မငှ မငတ်သင့်ဘဲ ငတ်ခဲ့ရ။ ထောက်မီမရ အသိဥာဏ်နှင့် တင်ကြိုမြင်ရ မပြည့်စုံသော အနာဂတ်နှယ် ဆီမီးတန်ဆောင် မလင်းခဲ့သည့် ရိုဘ၀က ရေတိမ်နစ်ခဲ့ပြီ။ [၂၄-၀၃-၂၀၁၉] ...
Mercy By Ro Mehrooz Where should we run, Leaving this Earth How should we close our eyes, Ignoring the injustice Why are we, Such lack of mercy And humanity Let’s join the hands together ...
I'm Barred By Mg Latt Tell me what it is called freedom Which I can never enjoy You say you can go and come freely, Wherever you wish easily Whenever I think about ...
I'm Arakani By Azad Mohammed My own Burmese people call me Bengali Neighbours call me Burmese The UN calls me refugee International community calls me stateless O’ people, imagineaminute ...
The Light of Poetry By Maung Abdul Khan Art has many branches. Poetry is one of them. Revolution has many branches. We believe poetry is one of them. ...